Izindaba - Ukusetshenziswa kwamatshe we-landscape ngokwemvelo
Okwetshe le-landscape, abaklami bathandana nobuciko bemvelo nobuciko bamatshe. Ubulula bakudala bokuqhekeka komhlaba kanye nephethini yemvelo kwephula ukuqhubeka kwangempela, okuletha umthelela omkhulu wokubuka nomphumela ongalindelekile.
Ubuso bemvelo betshe luhlobo lobuso bemvelo ngaphandle kokwelapha, okwakhiwa ngokwemvelo, njenge-slate. Ubuso begranite bunokwehliswa kwemvelo nokuqhekeka.
Uma ubheka ubuciko bemvelo neSayensi ezindongeni, intelezi yasendle yemvelo engavinjelwe iyakhishwa ezimayini ezimangele. Ukukhanya kwelanga kuthulula phansi ngezikhala eziphakathi kwamagatsha namaqabunga, ungqimba ngongqimba odongeni. Lesi sikhala ngokuzumayo siba nokuthula okukhulu nokuthula nokuzwana.
Ukungena lapha kusuka endaweni ephumelelayo, abantu abazizwa ukuthi bafuna ukuma lapha futhi bazizwe kancane.
Ukuthungwa komhlaba we-groove
Ukuhlukanisa ukujula nobubanzi bendawo yamatshe kuyindawo ejwayelekile yezitebhisi zezitebhisi. Akuyona nje i-anti-skid kuphela, kepha futhi inomphumela obonakalayo obonakalayo, okwenza ukuthungwa okuhlukile kwezobuciko neSayensi.
Lokhu kujula okujulile, nezimbali ezizungezile nezitshalo kuphezulu nokuncane, kuyaphelelisana, le ndoda ilandele amehlo ukuphishekela isiphetho esihle ngokwengeziwe.
Itshe le-wave le-Landscape
Imigqa yamatshe egagasi leqhwa ebushelelezi futhi icacile, imnyama futhi imhlophe etsheni, ilula futhi ijulile, imnyama njengomhlaba njengamawa, iqhwa elimhlophe njengempophoma eqeqesha iqhwa. Kwesinye isikhathi kukhanya, kwesinye isikhathi kuzolile, njengomdwebo wokwakheka komhlaba.